warkii.com » Hordhac: Villarreal vs. Barcelona – Kulanka Ay Ku Xidhan Tahay Rajada Barca Ee LaLiga, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Hordhac: Villarreal vs. Barcelona – Kulanka Ay Ku Xidhan Tahay Rajada Barca Ee LaLiga, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Barcelona ayaa u dagaallami doonta inay dib usoo noolayso fursadda ay ugu guuleysan karayaan horyaalka LaLiga marka ay maanta safarka ugu tagaan Villarreal, taas oo kaliya guul ay kasoo helaan ay kula loollami karayaan Real Madrid oo afar dhibcood kaga haysa hoggaanka horyaalka.
Villarreal oo dhibaatooyin badan ku jirtay ka hor intii aan caabuqa Korona loo bixin ayaa si weyn qaabkeedu usoo noolaaday intii ciyaaraha lagu soo laabtay, waxaanay soo cidhiidhsadeen kaalinta shanaad iyagoo ku hamiyaya inay afraad kala baxaan Sevilla oo saddex dhibcood ka sarraysa.
Guul-darrooyin soo gaadhay bilihii February iyo March ayaa Yello Submarines hoos u dhigay, waxayse kor usoo kaceen lixdii ciyaarood ee horyaalka la dheelay oo shan ka mid ah ay guuleysteen, waxaanay qaabkooda wanaagsan ku qaabilayaan Barcelona oo saddex kulamada ay martida tahay soo dhibaatoonayay.
Daliilka garabka siinaya Barcelona kulanka caawa ayaa ah rikoodhka wanaagsan ee ay ka haystaan kulamada El Submarino Amarillo oo aan lagaga soo badinin laga soo bilaabo March 2008, laakiin xili ciyaareedkii hore ayay kusoo galeen barbarro 4-4 ah.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka LaLiga, Villarreal wax guul-darro ah lamay kulmin, waxaanay soo heleen shan guulood iyo hal barbarro ah, taas oo ka dhigan in 18 dhibcood oo suurtogal ahaa ay ka heleen 16 dhibcood.
Barcelona ayaa iyaduna saddex guulood iyo saddex barbarro ah soo gadhay, waxaanay soo urursadeen 11 dhibcood oo ay ka heleen 18 suurtogal ahaa, waana halka ay Real Madrid ka heshay fursadda.
Villarreal waxay mar kale waayaysaa adeegga difaaceeda dhexe ee Ramiro Funes Mori oo dhaawac ah, sidoo kalena waxa uu shaki ku jiraa taam ahaanshihiisa Vicente Iborra oo muruqa waxyeello ka qaba.
Yellow Submarine ma jiraan dhibaatooyin walaac geliya Calleja oo haysa, waxaanu kala dooran karaa ciyaartooyo badan.
Carlos Bacca, Gerard Moreno iyo Paco Alcacer ayaa ku tartami doona labada boos ee weerarka, halka Samuel Chukwueze la siin doono boos xor ah oo uu garabyada kaga ciyaaro.
Dhinaca Barcelona, Ousmane Dembele iyo Frenkie de Jong ayaa dhaawacyo u jiifa, sidoo kalena Samuel Umtiti ayaa ka daba tegay.
Antoine Girezmann oo daqiiqaddii ugu dambaysay lasoo geliyey ciyaartii Atletico Madrid ayaa la filayaa inuu kusoo laabto safka hore oo labadii kulan ee niyad-jabka ahaa loogu beddelo ciyaar buuxda.
Sergi Roberto ayaa beddeli doona Nelson Semedo, halka Sergio Busquets uu lama taabtaan ka noqonayo khadka dhexe oo ay ka garab ciyaari doonaan Rakitic iyo Arturo Vidal, halka kubbad-sameeyaha heshiiska u saxeexay Juventus ee Arthur Melo la filayo inuu kaydka kasoo muuqdo.